Vegetarian Pork vs Real Pork: Fomba Fiompiana Kisoa Vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Vegetarian Pork vs Real Pork: Fomba Fiompiana Kisoa Vaovao
Nanafika an'i Hong Kong tamin'ny tafio-drivotra ny fangaron'ny legioma ary heverina ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny sakafo ara-pahasalamana. Miaraka amin'izany, ireo kisoa miompy eo an-toerana amin'ny alàlan'ny mpanorina ny Hong Kong Heritage Pork, John Lau Hon Kit, dia vaovao, voajanahary ary tsy misy hormonina. Ny sandan'ny sakafon'ny tena henakisoa tahaka izao dia lavitry ny ambany noho ny an'ny henan-kisoa tsy fihinanan-kena. Ny kisoa Tai Chi novokarin'i John Lau Hon Kit dia feno otrikaina, matsiro, ary mahatonga ny tsiron'ny henan-kisoa avy any an-toerana ho tsy hay hadinoina.
John Lau Hon Kit dia miantoka fa ny kisoa rehetra atsangana ao amin'ny toeram-piompiany dia omena sakafo faran'izay tsara izay tsy misy hormonina fanampiny sy fanafody tsy ilaina na tafahoatra. Vokatry ny fomba fiompiana sy fiompiana henjana, dia afaka mamokatra henan-kisoa manana kalitao avo indrindra izay voajanahary, mahasalama ary matsiro izy. Ny sakafo rehetra ho an'ny kisoany dia aterina amin'ny alàlan'ny milina famatsiana nafarana avy any Danemark izay kalitao nohamarinin'ny Vondrona Eoropeana. Ankoatra izany, ny rano fisotro ho an'ny kisoa dia avy amin'ny tendrombohitra Lau Fau Shan, loharano misy rano be mineraly.
Raha ampitahaina amin'ny henan-kisoa tsy misy zava-maniry eny an-tsena amin'izao fotoana izao, i John Lau Hon Kit dia mitazona fa ny fomba fiasa sy ny fiompiana vaovao sy tohanan'ny siansa ary ny fomba fiompiana dia afaka miantoka tsara fa ny kalitaon'ny henan-kisoa dia ambony indrindra, mahavelona ary matsiro. Ny ankamaroan'ny henan'omby dia mila karakaraina miaraka amin'ny sira, menaka ary zava-manitra hafa mba hahalavorary ny tsirony sy ny firafitry ny tena hena, ka miteraka sodium avo kokoa izay mitovy amin'ny sakafo voahodina na am-bifotsy. Ohatra, ny mofo 100g amin'ny henan-kena dia efa misy sodium 550 mg. Raha mitovy ny habetsaky ny henan-kisoa matavy sy mahia (vaovao tsy masaka) dia 59.4 mg ihany. Araka ny tolo-kevitry ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, ny fihinanana sodium isan'andro ho an'ny olon-dehibe dia tsy tokony hihoatra ny 2000 mg, izay mitovy amin'ny sotro iray (5 grama) amin'ny sira latabatra.
Ny henan-kisoa tena izy dia ambany amin'ny tavy mahavoky
Mba hitazonana ny fenitra avo lenta amin'ny kalitaon'ny henan-kisoa ao amin'ny toeram-piompiana kisoa Lova ao Hong Kong, John Lau Hon Kit dia nifikitra tamin'ny fampiharana fomba fiasa vaovao momba ny fiompiana sy fiompiana kisoa izay tompon-daka amin'ny fiompiana kisoa miaraka amin'ny sakafo mahasalama sy be otrikaina. Tsy ny henan-kisoa avy amin'ny toeram-piompiana John Lau Hon Kit ihany no vaovao, matsiro ary azo antoka, fa afaka mihinana azy amim-pahatokiana ny rehetra. Satria ny henan-kisoa dia ambany ara-boajanahary amin'ny tavy, ny henan'i John Lau Hon Kit's Tai Chi Pork dia matavy sy mahia, midika izany fa manan-karena amin'ny tavy ara-pahasalamana izy io saingy amin'ny fotoana iray dia tsy matavy loatra. Ny kisoa Tai Chi novokarin'i John Lau Hon Kit dia manambatra ny toetra tsara indrindra amin'ny kisoa Berkshire matsiro miaraka amin'ny hain'ny kisoa Landrace Danoà, ary ny lokon'ny kisoa Duroc mba hahatonga ny kisoa Tai Chi an'i Hong Kong Heritage Pork.
Na dia tsy misy kolesterola aza ny henan-kisoa tsy misy zava-maniry, dia ambony lavitra noho ny henan-kisoa ny taviny. Ambonin'izany, ny henan-kisoa tsy misy zava-maniry dia vita amin'ny soja, voanjo, vary, menaka anana ary nalaina leviora. Mety hiteraka olana ho an'ireo tsy afaka mihinana sakafo be kolesterola na olona tsy mahazaka sakafo toy ny varimbazaha na gluten izany.
Ny protocole fiompiana vaovao dia miteraka kisoa eo an-toerana
John Lau Hon Kit dia miziriziry amin'ny fiompiana ny kisoa Tai Chi nefa tsy mampiasa hormonina sy antibiotika ary tsy mampiasa afa-tsy ny katsaka sy soja avoakan'ny EU voamarina avy any Amerika ho sakafony isan'andro. Hatrany am-piandohana ka hatramin'ny farany, izy dia manolo-tena amin'ny fiompiana kisoa avo lenta ary manome ny tsenan'i Hong Kong kisoa matsiro sy vaovao tsy misy fanampin-tsakafo.
Raha ny momba ny asa fambolena sy ny teknolojian'ny fiompiana, John Lau Hon Kit no nitarika tamin'ny fampidirana modely fiompiana vaovao avy any Danemark any Hong Kong hanoloana ny maodely fiompiana kisoa nentim-paharazana. Ao anatin'izany ny famolavolana famahanana batch, mekanika fiarovana biometrika, rafitra fampangatsiahana rano, fanaraha-maso mandeha ho azy 24/7 ny mari-pana amin'ny efitrano, sy ny maro hafa.